Silwela amalungelo oluntu! ❖ www.PixelHELPER.org
Ukuba unengxaki kwaye ungazi ukuba wenzeni ngokulandelayo, jonga iPixelHELPER
pixel Mncedi ukhangele ihlabathi jikelele Inkuthazo kunye nenethiwekhi yomculi yamalungelo oluntu chasene Ingcinezelo kunye nenkululeko yokuthetha ukulwa. Ngobugcisa esifuna ukubufumana ezibalulekileyo kwimicimbi yoluntu khomba. Siyasebenza Iiprojekthi zoncedo lophuhliso e-Afrika. Zenzele Iziko lezonka elibunjiweyo ukuvelisa ukuze wandise Ukuqina kokutya for kwinkampu yeembacu, Imimandla enongquzulwano kunye neentlekele zendalo isonka esomeleleyo emathinini. Siyandisa Uzinzo lokutya e-Afrika. Kwindawo Uncedo olungxamisekileyo I-PixelHELPER izama ecaleni kweefektri zesonka esikhenkcezwe eAfrika ezikufuphi Iinkampu zeembacu ze-UNHCR ukuvula izibhedlele ezincinci zesoftware. Nceda usincede Nikela ngento yemenyu kunye nokuxhasa umsebenzi wombutho wethu.
U-Angela Merkel unika indawo yokuhlala kwezopolitiko uJulian Assange. Ikhathuni yobugcisa bevidiyo
Ukuba unengxaki kwaye ungazi ukuba wenzeni ngokulandelayo, jonga iPixelHELPER Epreli 24th, 2021Oliver Bienkowski